Toerana tsara indrindra mba Hihaona amin’ny Vehivavy ao Korea. Korea Mampiaraka Soso-Kevitra
Aoka fotsiny milaza fa samy handray soa ianao raha te-hihaona vehivavy iray amin’ny fiarahana amin’ny aterineto, ny faribolana ara-tsosialy na avy amin’ny fivarotana kafe. Raha ianao indray ny fivoriana ny ivelan’ny aterineto voalohany na dia olona avy amin’ny faribolana ara-tsosialy fa te-hahafantatra tsara kokoa, izy ll mahatsiaro ho azo antoka fa ampy ny fivoriana anao amin’ny fivarotana kafe. Izy ireo dia heniky ny hafa ara-dalàna ny olona izay afaka mahita ny tokony na inona na inona hitranga, ary izy dia tsara izany (dia mety mandeha any ny fivarotana kafe miaraka amin’ny namana na irery.) Ny fanampiny soa dia ianao raha ny vahiny dia tsy ho nahazo be loatra ny stares avy ireo manodidina anareo noho ny miresaka amin’ny vehivavy koreana. Na raha toa ianao ka manatona sy ny fifandraisany amin’ny koreana vehivavy misy ny voalohany ianao dia afaka sisa mora: matetika aza t hahazo fahatapahan-drano avy amin’ny hafa kafe-shop mpividy. Tsy azo antoka ny fomba manatona sy mifandray amin’ny izay tsara tarehy koreana vehivavy. Manoro hevitra aho ny hahazo ny dika mitovy ny Daty koreana ny Vehivavy. Izaho ve no ao an-kiraro ao Korea, ary efa nahita ny lalana ho any amin’ny rangotra, ratra kely mba fanatanterahana ny fifandraisana, ary na dia bebe kokoa Ny s toy ny manondraka ny mofonao izay rehetra koreana vehivavy tonga hisotro. Tsy misy toerana hafa toy izany. Azonao atao mihitsy aza ny mahita club ankizivavy sy ny mpandihy izay dia nankafy ny kafe sy resaka mahafinaritra.
Mety tsy hiaraka ny resaka loatra. Ao ny zava-nitranga, rehefa koreana vehivavy (na ny vehivavy amin’ny ankapobeny) mitady mba hihaona amin’ny olona izy ireo, lohany ny iray amin’ireo sahirana tanteraka ny fivarotana kafe. Afaka mamantatra azy ireo amin’ny alalan’ny tenany amin’ny mankaleo boky na mihaino hira. Izy ireo dia maty ho an’ny olona ny miresaka azy. Inona aho raha natahotra loatra ny miresaka amin’ny vehivavy koreana. Ary aoka isika hilaza aho manomboka ny resaka, inona no hataoko rehefa afaka izany. Raha toa ka manomboka miresaka ny vehivavy sy ny manana mahafinaritra ny fifandraisana amin’ny vehivavy koreana dia manahiran-tsaina anao (tahaka ahy) avy eo aho fahazoan-dalana hiditra ny hahazo ny dika mitovy ny Daty koreana ny Vehivavy. Ianao ll manana ny fitaovana rehetra dia mila mahazo tsara tarehy ny vehivavy, mba hitondra anareo ho zava-dehibe. Ahoana ny momba azy ireo fivoriana ao amin’ny fikambanana. Na amin’ny alalan’ny namana. Misy fivarotana kafe tena ny toerana tsara indrindra mba hihaona vehivavy avy any Korea.
Eny sy tsia
Azo antoka ny s mora kokoa ny hihaona koreana ny vehivavy any. Tsy maintsy miatrika fiaraha-monina koreana hitsara azy na ny mpifanolo-bodirindrina ireo Koreana mandalo ny maso ratsy na ny nanapaka ny anao. Ny koreana vehivavy izay mandeha any dia tsara tarehy, misy tsara nanova ny fiainako amin’ny fifamoivoizana SY ny toerana dia ny vatany sy ny namana. Eto ambany ny lahatsary Gangnam sy ianao ll hahita ny zavatra amin’ny fivarotana kafe toa akaiky ny farany (miala tsiny noho ny tsy milamina ny tanana.) Raha miresaka ny kisendrasendra nefa tsara tarehy koreana ny vehivavy dia ny vaovao ianao dia avy eo aho fahazoan-dalana hiditra ny hahazo ny dika mitovy ny Daty koreana ny Vehivavy. Ianao ll fantatro izay mahatonga ny resaka asa na inona na inona ny fiteny. Izany dia hanampy anao amin’ny fanararaotana ny toerana tsara indrindra mba hihaona vehivavy avy any Korea
← Free Online Dating Chat - Mampiaraka Chat Room - Hiresaka amin'ny Olon-tsy fantatra
Koreana zazavavy webcam lahatsary →